Ajjeechaa Kaashogjii: Reenfii isaa 'asiidii keessatti bulbulame' - BBC News Afaan Oromoo
Qondaalli olaanoo Turkii fi gorsaa pirezidaantii kan ta'an Yaasin Aktaay, reeffi Jamaal Kashogjii erga kukkutamee booda asiidiitti makamee badeera jedheen amanna jedhaniiru.
"Sababiin tokkichi ta'u danda'a jedhame "warreen Gaazexeessaa Sawud Arabiyaa Istaabul keessatti ajjeesan kunneen "faana balleessuuf" jecha kan gochuu danda'u jedhaniiru.
Jamaal Kashogjii mootota Sawudii qeequun kan beekamu Onkoloolessa 2 Qoontsilaa Sawud Arabiyaa Turkii keessatti argamu keessatti ajjeefame.
Kashogjii gaazexessaa bulchiinsa Sawudii qeeqaa tures konsulaa biyyaattii keessatti Onkolooleessa 2 ajjeeffame.
Reeffi isaa bulbulamu isaatiif raggaan poolisii dhiyaate tokkolleen hinjiru.
''Amma reeffa isaa bulbulan qofa miti, akka qilleensatti dhurkee badu taasisan hubanna,'' jedhaniiru.
Ilmi Mootii Saawudii, waa'ee Kashogjii bilbilaan maal jedhan?
"Ilmi Mootichaa Sawudii Mohaammed biin Salmaan Jamaal Kashogjii akka nama hamaa Isilaamummaa leellisu akka ta'etti akka ilaalan US'tti himuu isaanii miidiyaaleen gabaasan.
Akka gabaafametti Ilmi Mootichaa Mohaammed kan kana jedhan bilbilaan haasawaa Waayis Hawuus waliin taasisanii turaniin yommuu ta'u kun kan jedhame erga achuu buuteen Jamaal Kashogsii dhabamee garuu osoo Sawud Arabiyaa akka isa ajjeefte hin amaniin duradha.
Sawud Arabiyaan garuu gabaasa kana akka Waashington Post fi Niwu York Taayims baasanitti wakkatteetti.
Kashogjiin lammii Sawudii yommuu ta'u gaazexaa US, bulchitoota biyya isaa qeequudhaan beekama.
Reeffi isaa hanga ammaa hin argamne, garuu Turkiin, US fi Sawud Arabiyaa akka inni Qoontsilaa Sawud Arabiyaa Istaambul keessatti argamu keessatti Onkoloolessa 2 ajjeefame waliigalaniru.
Sawud Arabiyaa maatiin moototaa ajjeechaa isaa kana keessaa akka harka hin qabne dubbatanii "dhugaa jiru barbaaduudhaafis murannoo qabna" jedhan.
Ji'a darbe Ilmi Mootichaa Mohaammed, "Yakki sun Sawudoota hundaaf dhukkubbiidha," jedhan.
Bilbilaan maaltu jedhame?
Soddaa Pirezedaant Doonaald Tiraamp Jaared Kushineeriifi Gorsaa Nageenyaa Biyyaalessaa Joon Boolten waliin taasifameen, Kashogjiin miseensa Muslim Brotherhood, kan dhaabbata leellisaa Isilaamummaa ce'umsaa ta'e akka ture Ilma Mootichaa Mohaammed waliin haasa'uu isanii Washington Post gabaaseera.
Bilbilli kun akka bilbilame kan gabaafame Onkoloolessa 9, erga Kashogjiin achi buuteen isaa dhabamee torban tokkoo booddeedha.
Ilmi Mootichaa Mohaammed hariiroon US-Sawudii akka itti fufuu qabu cimsanii gaafachuun isaaniillee gabaafameera.
Ilmi Mootichaa Mohaammed hariiroon US-Sawudii akka itti fufuu gaafatan
Akka yaada gaazexaa sanaatti, maatiin Kashogjii inni miseensa gare warra Muslim Brotherhood akka hin taane dubbatanii gaazexeessaan ajjeefame kun ofuma isaayyu dhiyeenya kana kana waakkatee ture jedhan.
"Jamaal Kashogjii haaluma kamiiniyyu hamaa ta'uu hin danda'u. Akkas jechuun mataan isaa waan hin taanedha," jedha yaadni sun.
Qorannoon hanga ammaatti argame maal agarsiisa?
Hanga ammaatti kashogjiin akkamiin akka ajjeefame irratti waliigalteen hin jiru.
Kaadhimaa isaa lammii Turkiin taate Hatice Cengiz waliin gaa'ela raawwachuuf ture kan gara Qoontsila Sawud Arabiyaa Istaambul seene.
Roobii darbe Turkiinillee "akka duraan karoorfameen" akkuma Qoontsilaa sana seeneen qabamee qaamni isaa cicte.
Isa dura miidiyaan warra Turkii Kashogjiin akka dararame gabaasee ture.
Sawud Arabiyaan Kashogjii ilaachisee maaltu akka ta'e kan duraan jedhe jijjiirteetti.
Yeroo inni jalqaba achi buuteen isaa dhabameme, Kashogjiin naguma isaa gamoo keessaa akka ba'e dubbattee turte. Boodarra garuu akka ajjeefame amanuun, ajjeechaa itti qopha'ameefi bu'aa "hojii gara jabinaati" jettee turte.
Shakkamtoota 18 Sawudii Arabiyaa keessatti himatamu jedhanis to'annaa jala oolchuu dubbatameera. Turillee shakkamtoonni kun akka dabarfamanii kennaman barbaaddi.
Turkiin ajjeechaa kanaaf Sawud Arabiyaa ifatti maqaa gochuu irraa callisuu filatteetti.
Pirezedaantiin Turkii Xayiib Erdogaan Mootii Sawudii Salmaan waliin torban darbe yeroo dubbatan, lamaanuu haala yakka ajjeechaa kana qoratani irratti waliigalaniiru.
Biyyoonni biroon maal jedhan?
Biyyoota warra michuuwwan ishee ta'an irraa deebii dhimma kanaa gaafachuu dabalatee du'a kana waliin walqabatee Sawud Arabiyaan mormiin ishee mudateera.
Yeroo dhuma kan haaromfame: 30 Adooleessa 2021
Aweetuu, bishaan umurii guutuu danfu
Yeroo dhuma kan haaromfame: 30 Adooleessa 2019